Ukuskena kwe-Duplex kuyinhlanganisela ye-ultrasound yendabuko (ku-B-mode) ngamasu e-Doppler ekunqumeni ukuhlinzeka ngegazi nokuhambisa. Le nhlanganisela yindlela ephumelela kakhulu yokuxilongwa nge-angiology yanamuhla.
Ukuskena kwe-Duplex ku-phlebology kubhekwa "njengezinga legolide". Ezikhathini zanamuhla, i-phlebology yanamuhla isebenzisa le nqubo ukuze ihlolwe cishe cishe wonke amacala. Ukuskena kwe-Duplex yemifudlana kusiza ngeso lengqondo ukuthi i-vasculature, ebalulekile ngobude, ibhala ukuhamba kwegazi kuyo. Ukusetshenziswa kwalendlela kuyadingeka hhayi kuphela ukuxilongwa, kodwa futhi nokwelashwa nokubikezelwa kwesifo somzimba.
Kunezindlela ezahlukene zokuqaliswa kwalolu hlelo. Indlela yokuhlola ivumela ukuthi unqume kuphela izimpikiswano eziyinhloko, inamba encane yabodokotela bokuxilongwa kwe-ultrasound ngaphandle kokubonisana kuqala nesiguli esinikezwe ne-phlebologist inganikeza incazelo eningiliziwe ngesimo semithanjeni. Isikhathi esincane sinikezwe ukuhlolwa, imizuzu engaba ngu-10. Isibonelo, ukuskena okuphindwe kabili emithanjeni yemilenze engezansi (egcwele!) Kufanele kuthathe imizuzu engu-40-50. Ukuhlolwa kwesifo se-venous, i- ultrasound ingasetshenziswa : ikuvumela ukuba ubone izibhamu, ezingasetshenziswa ngokucwaningwa ngokuningiliziwe ngokuskena kwe-duplex.
Ucwaningo oluthe xaxa nolwazi luzoba yisimanje sesibili sokuskena, emva kokuvakashela kumuntu we-phlebologist oyobona imibuzo edingekayo yokuxazululwa nokucaciswa. Uma le nqubo isenziwa ngaphambi kokuvakashelwa kwakhe, khona-ke kunesidingo sokuyiqhuba kabusha, ngoba ekwamukelwa kwe-phlebologist kunemibuzo engaxazululwa.
Emhlanganweni, izinyawo ziqala ukuhlolwa ukuze zihloniphe izindawo ezidinga ukunakwa okukhethekile. Ukuhlolwa kufanele kwenziwe nakwesimo esithandwayo (imifino ejulile ibonakala kangcono), futhi esimweni sokuma (kulokhu - ngaphandle). Ngesiza senzwa, zonke izinyawo zamanqina zihlolwa. Kukhona izigaba zezifo ezithathelwanayo, ezingafakwa kuphela yi- ultrasound.
Ibhuloho elinomuncu lamalungu angaphansi lihlanganisa izivalo ezingu-26 ohlangothini ngalunye. Kuvame ukuguqulwa kunezifo zesisindo sonyawo.
Njengoba kushiwo kakade, ukuskena kwe-duplex kuhlanganisa inhlanganisela ye-ultrasonic B-mode ne-Doppler. Emoyeni ye-B, ithuluzi lenza i-ultrasound yemvamisa ethile engena ngezicubu. Umngcele wezicubu zobukhulu obuhlukahlukene ubangela ukucabangela kwe-ultrasound nokubuyela kwawo emuva kwenzwa. Le sensor isebenza ngokungapheli. Njengoba ibanga eliphakathi kwe-sensor nomngcele, isikhathi esiningi siyodlula emisebeni ye-ultrasound kuya ekuthinweni kwayo. Ngakho-ke, ukuskena kanye nokuvuselelwa kokubili kwemikhumbi engaphansi kokucwaninga kwenzeka. Umbuso weDoppler uncike emthethweni ofanayo: i-ultrasound, lapho ukugoqa ngezinhlayiya ezihambayo, kungabonakali nje kuphela, kodwa futhi kuyashintsha imvamisa, futhi ukuguqulwa kwaleli pharamitha kufana nesilinganiso sezinto ezihambayo. Esikhathini sokutadisha i-vasculature, izinto ezihambayo ziyi-red cells. Esikhathini samanje, kungenzeka ukwakha umbala we-flow chartogram emkhunjini lapho ukuqina nokuqondisa kwegazi kukhonjiswa ngombala. Le ndlela imephu ye-Doppler yombala.
Ngosizo lwalezi zimbuso ezimbili, umuntu angathola ulwazi olusetshenzisiwe lwezitsha, isimo sezindonga zawo nezibani, ahlole izinguquko kuzo, futhi alandele izinguquko ku-hemodynamics. Ngaphezu kwalokho, le ndlela ayiyona ingavamile, iphinde ivumele ukuxilonga inani elibalulekile le-pathology ye-vascular.
Ukuhlaziywa komchamo jikelele - okujwayelekile kanye nokugula
Ukuhlolwa kwezokwelapha enkulisa ngaphandle komsebenzi
Indlela yokwenza inhloli kusuka amazambane? Sifunda!
Kungani iphupho Kulobo busuku obucwathile, ngobusuku obucwathile, ezinkanyezi, inkanyezi ngokudubula
Indlela ukunciphisa ukudla ukunciphisa umzimba: ukubuyekezwa, izindlela kahle nokuba kwalo isiqondiso esisebenzayo
Indlela ukhohlwe intombazane oyithandayo?